China Isingadzokeri-zvakare Oxygen Mask fekitori uye vanotengesa | Bornsun
Chiremba anorasa okisijeni maski ane dura bhegi anoshandiswa kune varwere vanoda huwandu hwakawanda hweoksijeni, kunyatso shandisa okisijeni kune yakanyanya kusangana. Iyo Isiri-Yekudzosazve mask (NRB) anoshandiswa kune varwere vanoda huwandu hwakawanda hweoksijeni. Varwere vanotambura nekukuvara kunorwadza kana chirwere chemoyo chinodaidzira iyo NRB Iyo NRB inoshandisa dura hombe rinozadza apo murwere ari kufema. Iyo mweya inomanikidzwa kuburikidza nemakomba madiki padivi remask. Makomba aya anovharirwa apo murwere ari kufema, nekudaro kudzivirira mhepo yekunze kuti isapinda. Murwere ari kufema oxygen yakachena. Kuyerera kweiyo NRB ndeye 10 kusvika 15 LPM.
Inoshandiswa kuendesa mweya wekufema weokisijeni kumapapu evarwere. Iyo okisijeni mask inoratidzira tambo dzakasununguka uye dzinogadziriswa mamhuno emhino iyo inogonesa yakanakira kukwana pane akasiyana siyana ehukuru hwemeso Oxygen Mask ine Tubing inouya ne 200cm oksijeni inopa tubing, uye iyo yakajeka uye yakapfava vinyl inopa huru murwere nyaradzo uye inobvumira kuongororwa kunoonekwa. Oxygen Mask ine Tubing inowanikwa mune girini kana yakajeka ruvara.
1.Made yezvokurapa giredhi PVC.
2.Adjustable mhino clip inosimbisa inonyatsokwana kukodzera.
3.Elastic Musoro tambo yePatient Kugadziridza
4.Smooth uye minhenga kumucheto kune murwere nyaradzo uye kudzikisira kutsamwa mapoinzi
5.Two mavara esarudzo: girini uye yakajeka.
6.DEHP yemahara uye 100% latex yemahara inowanikwa.
7.Tubing urefu inogona kuve yakagadzirirwa.
1.Mask pamwe kwakavharwa nenyama ngaasungirire
2.Adjustable mhino clip
5.bag: 1000ml kana 600ml
Zvese zvishandiso zvinoshandiswa mukuvaka kweOxygen Mask, uye iyo Oxygen Tubing ndeye latex yemahara, yakapfava uye yakatsetseka nzvimbo isina kupinza kwakapinza nechinhu, Izvo hazvina mhedzisiro isingafadzi paOxygen / Mishonga inopfuura nepasi peyakajairika mamiriro ekushandisa. Mask Zvinhu ndezve hypoallergenic uye zvinodzivirira kuvesa uye nekukurumidza kunaya.
1.Sungirira okisijeni inopa tubing kune iyo oxygen sosi uye isa oxygen kune yakatarwa kuyerera.
2.Check yeoksijeni kuyerera mukati mechigadzirwa.
3. Isa masiki pachiso chemurwere nekusunga tambo pazasi penzeve nekutenderedza mutsipa.
4.Dzvora zvinyoro magumo etambo kusvikira mask iri yakachengeteka.
5.Mold tambo yesimbi pane mask kuti ikwane mhino.
Pasuru Rudzi: 1pc / Pe bhegi, 100pcs / ctn.
Lead nguva: ＜Mazuva makumi maviri nemashanu
Nzvimbo Yokutanga: Jiangsu China
Mbereko: EO gasi
Ruvara: Transperant kana Green
Iyo Mask Kukura kuraira:
1.Size XS, Mucheche (0-18 mwedzi) Anomomically akaumbwa kumeso kumeso inogadzira yakachengeteka chisimbiso kubatsira vabereki nevachengeti kupa mishonga yeaerosol kuvacheche.
2.Size S, Yevana Yakatambanudzwa (1-5 makore) Anatomically yakaumbwa kumeso mask inogadzira yakachengeteka chisimbiso kubatsira vabereki nevachengeti kupa mishonga yeaerosol kumwana mudiki.
3. Saizi M, Pediatric Standard (6-12 makore) Zvishoma zvishoma masiki zvinopa yakachengeteka chisimbiso sezvo mwana anokura. Batsira kupa mishonga yeaerosol kuvana vane misikanzwa uye vanoramba kufema ma MDI.
4. Saizi L, Adult Standard (makore gumi nemaviri +) Mirayiridzo inokurudzira varwere kuti vachinjirwe kuchigadzirwa chemuromo nekukurumidza pavanokwanisa - kazhinji vanenge makore gumi nemaviri ekuberekwa.
5. Saizi XL, Yakakura Yakawedzerwa (makore gumi nemaviri +) Mirayiridzo inokurudzira varwere kuti vachinjirwe kuchigadzirwa chemuromo nekukurumidza pavanenge vachikwanisa - kazhinji kutenderedza makore gumi nemaviri ekuberekwa.
Iri zera renzvimbo riri pamusoro ndere kungotaura chete
Pashure: Nasal Oxygen Cannula-yakapfava Zano
Zvadaro: Oxygen Mask